ဒီနေ့ရဲ့ ပီတိ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ကျွန်မက ငွေကြေးချမ်းသာမှု နည်းပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချမ်းသာမှုများ ပါတယ်။ ငွေကြေး နဲ့ စိတ်ချမ်း သာမှုကို အချိူး ချိူး မယ်ဆို 25:75ပြောရ ပါမယ်။ စိတ်ချမ်း သာမှူက75% လောက် ရှိ အောင် ကိုယ့်ဖာသာ ကျိူးစား နေသူ ပါ။ ကျွန် မက စိတ် တို တတ် သလောက် သနား လွန်သူ ပါ။ ကျွန်မရှေ့ ညည်းပြရင် ရှိတာလေးတော့ တဝက်ပါသွား တတ်ပါ တယ်။ ခုရက်ပိုင်း ကျွန်မဘဝကို (မရေရာမသေချာ သောသေခြင်းကိုသိသိနဲ့) ပုံစံချလိုက် ပါတယ်။ ပထမကတော့ မြေဇင်းတရား တွေက နံပါတ် တစ်ပေါ့။ ဒုတိယ ကစာ ရေးမယ်။တတိယက. ဗေဒင် လမ်းပါ။ဒါကြောင့် သီတင်း ကျွတ်ပိတ် ရက် ဗောဓိအေး ငြိမ်းသွား ပါမယ်။ စာကလည်း ကြိုးစား ရေးနေ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် ရဲ့ ဗေဒင်လမ်းလေး ကို ပိုလို့ တိုး တက်အောင် သင် တန်း တက် လို့ နွှေး ရ ပါ တယ်။ အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ မှာ အလုပ် သွား ပါ တယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ၊တနင်္လာ ဗေဒင် သင်တန်း သွားပါ တယ် သင်တန်းဆင်းရင် ဘုရား လမ်းမှတ် တိုင်ကျိူ က္ကဆံကနေ အိမ်ကို 84Bus စီးပြန် ပါတယ်။ တခါတရံ မြေနီမှတ်တိုင်ထိမတ်တတ်ရပ်စီးရပါတယ်။လက်တွေနာလဲဇွဲထားရတာပေါ့။ ဒီနေ့ ပါ။ 84Bus ပေါ် တက်တက် ခြင်း နှစ် ယောက် တွဲခုံ လေး မှာ နေရာ ရပါ တယ်။ ဘေး ဖက် ဆိုတော့ လိမ့်ကျမှာစိုးလို့ နံရံနားက တန်းကိုလှမ်းကိုင် လိုက်ပါတယ်။
ဒီ အခါမှာ ဘေးဖက်က အလွန်ပိန်သော အမေကြီးက. ကျွန်မ ရင်ခွင်ထဲ ရောက်သွားတာပေါ့။ ပိန် ပိန် သေးသေးလေးဆိုတော့ ထွားကျိူင်းတဲ့ ကျွန်မ ရင်ခွင် ထဲမှာ ပါ။ မော့ကြည့်ပြီး ပြုံး ပြ တယ်။ ပါးတွေ ချိူင့်နေ ပြီ။ သွားတွေ မရှိ လို့ စကား ပြောရင် တမြုံ့ မြုံ့ ပြီး တော့ ဝတ် ထား တဲ့ ရှန်သား အင်္ကျီ လေးနဲ့ ပါ တိတ် လုံ ချည် လေးက တပတ် နွမ်းပေ မယ့် ဖြူ ဖြူ စင်စင် လေး ပါ။ သနပ်ခါး လေးတွေက ဟိုကွက် သည်ကွက် ပြုံးပြ တာလေး ကချစ် စရာလေး။ အဖွားက အသက် ၈၆ ရှိပြီ တဲ့။သြော် အမေရှိရင် ဆိုတဲ့ အတွေး စတွေးမိ ပါတယ်။ မျက်စိ ခွဲဖို့ မမြင်လို့ပြတာ အသက် သိပ် ကြီးနေ ပြီမခွဲနဲ့ ဆိုလို့ ပဲခူးပြန်တော့မှာ သမီးတဲ့ ကျွန်မက မမြင်ရဘူး လားဆို တော့ တဖက်လုံးဝ မမြင် ရဘူးတဲ့။စိတ်မှာ အမေ့အရွယ်မြင်ရင် ထိခိုက်တတ်သူပါ။ဒါကြောင့် လက်ထဲ မှာ ကိုင်ထား တဲ့ ပိုက်ဆံ၃၀၀၀ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။မယူနိုင်သေးပဲ အံ့သြ နေတဲ့ ပုံစံလေး ကိုခံစား ရပါတယ်။ သူ့ရှေ့ နားချ ထားတဲ့ ခြင်းလေး ထဲမှာ ပန်းသီး ငါးလုံးလောက်ထည့်ထား တဲ့အိပ်လေးလှမ်း ယူပါ တယ်။ ဆရာမလေး ပေးတာ သမီးစား ပါတဲ့။ ဟင့်အင်း အမေပဲစားပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အခု စျေးကွေ့ကတူမဆီသွားမှာ သူတို့ကလာရင် မုန့်ဖိုးလေးပေးတတ်တော့ယူပြီး အမေပဲခူး ပြန်မယ် တဲ့။ ကျွနိမက သားသမီး မရှိဘူးလား တယောက်ထဲ မျက်စိလဲ မကောင်းဘူး ဆိုတော့ ပြုံးတယ် လေ။ခင်ပွန်းသည်ရှိတုံးက သားနဲ့သမီးရှိပြီငါတို့အားကိုးရပြီတဲ့။အခုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။
သမီးက. ဥပုဒ်ရက်ဆို ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရင် ငွေ၁၀၀. ၂၀၀ ပေးပါသေးတယ်။ သားက တော့ မပေးဘူးတဲ့။ ကျွန်မက. မသဲနု ဆိုတော့ တရာ နှစ်ရာနဲ့ဥပုဒ်စောင့်သွားတယ်ဆို စိတ်မကောင်းလို့ အိတ်ထဲကငွေ၂၀၀၀ နောက်ထပ် ထုတ်ပေးတော့ တော်ပြီ တော်ပြီများနေပြီ များနေပြီ မယူတော့ ပါဘူးတဲ့။ အတင်းလက်ထဲ ထည့်ပေးတော့ ပြောတဲ့စကား လေးက။ ငွေ၅၀၀၀ ဆိုတာ မမြင် ဘူး တာ ကြာ ပါပြီ။ မျက်စဉ်းက ၁၀၀၀ ဆိုလို့ ဝယ် ဖို့ စဉ်းစားနေ ရတာ။ ပြီးတော့ သီတင်း ကျွတ်လ ပြည့်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားရင် အမေလှူစရာ ရပြီ။ သမီး အတွက် အလှူလှူ ပေးမယ် နော် တဲ့။ ကျွန်မ က စာရေးချင် သူပီပီ အမေ့ နာမည်မေး လိုက်တယ်။အဝတ်အစားလဲ ဥပုဒ် စောင့် တဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ ပေး တယ် စားစ ရာတွေ လဲ ပေးကြ ပါတယ် တဲ့။ သမီး လေးလည်း ပြည့်စုံ သည် ထက် ပြည့်စုံ ပါစေတဲ့။ ကျွန်မက. သဒ္ဓါတက်ရင်ပြန်ရတာ တွေမရတာ တွေမတွေး တော့ ပါဘူး။ ၅၀၀၀ဆိုတာကျွန်မအတွက် တချီတည်းသုံးတဲ့ငွေပါ။တခါတလေ မုန့်ဝယ်စားတာ လောက် ပါပဲ။ အမေကြီးအတွက်က မမြင်ဘူးတာကြာသောပိုက်ဆံပါ။သူပျော်နေတာလေးက အများကြီးလေ။ နေကပူနေတော့ သူ့ခြငိးလေးထဲကြည့်လိုက်တော့ ထီးမတွေ့ပါဘူး။ ထီး မပါဘူး လားဆို ပျောက် သွားလို့တဲ့အိတ်ထဲကထီးထုတ်ပေးတော့ မယူပါရစေနဲ့တော့များလွန်းပါပြီတဲ့။
ကျွန်မမှာ မိုးဝင် ကာနီးက သမီး ဝယ်ပေး ထားတဲ့ ထီး အပိုရှိ ပါတယ်။ ယူသွား ပါဆို တော့ သမီး အခု အပြန် ပူမယ်တဲ့ ကျွန်မ အိမ်က. အ ထဲ သိပ် မ ဝင် ရ ပါ ဘူး ဆို ပေး လိုက် တယ်။ မနီးလို့ပါ ယောဂီ လုံ ချည်သာ အဝတ် များ တဲ့ ကျွန်မ မှာ အညို ရောင် လုံချည် အ သစ် တွေ အများ ကြီး။ ပေးချင် မိပါ တယ်။ ကျွန်မ ကားပေါ် က ဆင်းတော့ အမေ ကြီး က မဆင်း ရ သေး ပါ ဘူး။ သဒ္ဓါ တစ်ခုမှာ ပီတိပဲလိုပါတယ်။ကျွန်မမှာ ချမ်းသာတာက. ကရုဏာပါ။ ရှိတဲ့ အထဲက ပေးရတဲ့ အခါ တိုင်းပီတိနဲ့ပဲပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မချမ်းသာတာစိတ်ချမ်းသာမှုပါပဲ။ ဒီနေ့ အတွက်တော့ ပီတိတွေရလာခဲ့တာစိတ်ခွန်အားတွေပါပဲ။၁၁ရက်နေ့ ဗောဓိအေးငြိမ်း သွားပါမယ် သီတင်းကျွတ် လပြည့်မှာ ဗောဓိအေးငြိမ်း မှာ နေရမှာမို့ ပီတိ တွေလဲ အများ ကြီး ပါ။ ပဌာန်းငါးကျမ်းတွဲကြီးကို နှစ်ချီရွတ်ရသမျှ မနက်ဖြန်ပြီးတော့မှာမို့လည်းကြည်နှူးရပြန်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့စားဝတ်နေရေးလို အပ်ချက်တွေကို သားလေးကဖြည့်ဆည်း ပေးလေတော့ ကိုယ်ရှာတာကိုယ်လှူရင်း သေခြင်း နဲ့နီး ပါပြီ ဆိုဆို အနာဂတ်အိပ်မက် ကုသိုလ်တွေက. ပထမ. ဒုတိယ. တတိယ စသည်ဖြင့် အစီ အစဉ် တွေကို တန်းစီရင်း===============။
မနီပွန်းစံ Facebookပေါ် မှ စာဆုများ